दिउँसो १२ बजे देखि ३ बजेको बीचमा जन्मिएकाहरुको कस्तो हुन्छ भाग्य ? हेर्नुहोस् ! – Khabar Silo
काठमाडौँ । बुधबार भन्ने वित्तिकै बुध ग्रहको दिन, यसदिन भगवान गणेशको पनि पूजा अर्चना गर्ने गरिन्छ। धर्मशास्त्रका अनुसार बुधबार बुध ग्रहलाई पुज्दा विभिन्न समस्याबाट समाधान तथा राहत मिल्ने गर्छ । बुध ग्रहको प्रसन्नताका लागि भगवती दुर्गाको पनि यसदिन पूजा अर्चना गर्दा फाइदा पुग्छ। बुध ग्रहलाई भगवान विष्णुको प्रतिनिति मानिन्छ, त्यसैले धन, वैभवआदिका सम्बन्ध बुधसँग छ। […]
काठमाडौं । अब मंसीर लाग्दैछ, यो सँगै विवाहको चटारो पनि हुने गर्दछ । समाजमा अझै पनि शास्त्रीय मान्यतालाई साँचो मान्ने गरिएको छ । शास्त्रमा मानवीय जीवनका विभिन्न पक्षबारे वर्णन गरेको पाइन्छ । समुद्रशास्त्रमा शारीरिक अंगको बनावट तथा रुप रेखा हेरेर कुनै पनि व्यक्तिको भाग्य, गुण र जीवनका विभिन्न पक्षबारे थाहा पाउन सकिने कुराको वर्णन गरिएको […]
Posted on November 29, 2020 November 29, 2020 Author khabar silo
सात दिनभित्रमा तपाइले सोचेको काम बन्नेछ बिल्कुलै बेवास्ता नगर्नुहोला, ॐ लेखि सेयर गरौं!!! ॐ मात्र उच्चारण गर्नु भयो भने पुरा ब्रमाण्ड्को देबि देबताको शक्ति हुन्छ। परापूर्व काल देखी अहिले सम्म शिवलि’ङ्गलाई किन पुजा आजा गरी मान्छन ? किन के का लागि पुजा गर्छन । अन्य धर्मका मानिसहरु आफ्ना साना—साना बच्चालाई भन्छन् कि हिन्दुहरु लिं’गलाई पुजा […]